Inona no atao hoe Mashup? | Martech Zone
Talata, Jona 20, 2006 Alatsinainy 15 Febroary 2016 Douglas Karr
Ny fampidirana sy ny mandeha ho azy dia lafin-javatra roa izay tadiaviko tsy tapaka amin'ny mpanjifa… ny mpivarotra dia tokony handany ny fotoanany amin'ny famolavolana ny hafatr'izy ireo, hiasa amin'ny famoronana, ary hikendrena ny mpanjifa amin'ny hafatra tian'ny mpanjifa ho re. Tsy tokony handany ny fotoanany rehetra amin'ny famindrana angona avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana manaraka izy ireo. Mino aho fa ny Mashups dia fanitarana an'ity fampidirana sy mandeha ho azy eto amin'ny tranonkala ity.
Ny mashup, amin'ny fivoaran'ny tranonkala, dia pejin-tranonkala, na rindranasa an-tranonkala, izay mampiasa atiny avy amin'ny loharano mihoatra ny iray hamoronana serivisy vaovao tokana aseho amin'ny sehatra iray.
Ny mashup amin'ny Internet dia matetika misy rindrambaiko fampiharana 2 na maromaro. Ohatra iray mety ny fanindrahindrana hetsika ara-tsosialy amin'ny Google Map izay mampiasa ny Twitter API ary ny Google Maps API. Tsy fialamboly sy fitaovana fotsiny intsony izy ireo, misy sehatra maro izay orinasa vonona ankehitriny - fampidirina ny fikarohana, ny fiarahamonina, ny CRM, ny mailaka ary ny loharanom-baovao hafa hamokarana rafitra feno mifehy ny asa fanamoriana sy fampidirana tena sarotra.
Tao anatin'izay taona lasa izay, ny teny manapotsika matetika dia miresaka momba ny famokarana horonantsary sy feo izay loharanon-tsary na mozika roa na maromaro atambatra. Ity misy ohatra tsara iray - AC / DC sy ny Bee Gees:
Tags: APIGoogle Mapsfampifandraisan'ny mpampiasa saryGuimanapotsikaTwitterFampiharana tranonkalaWeb fampandrosoanainona ny mashup